Top 5 nke kacha mma Ecommerce nyiwe maka 2016 | ECommerce ozi ọma
Ọ bụ ezie na ọ dịghị otu e-azụmahịa n'elu ikpo okwu na-arụ ọrụ maka azụmahịa niile, anyị ga-enwerịrị ezi uche na mkpa a kapịrị ọnụ nke ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke anyị bu n'uche, ọ ga-enyere anyị aka ịchọta nhọrọ kachasị mma. Iji nyere aka ntakịrị nhọrọ ahụ, ebe anyị na-ekekọrịta ya Top 5 nke kacha mma Ecommerce nyiwe maka 2016.
1 1 Shopify
3 3. M! Kart
N'ihi n'eziokwu na ọ bụ ikpo okwu a kwadoro na ịdị mfe nke etinyere ụlọ ahịa ahụ, ha na-eme ya otu n'ime Ecommerce kachasị mma taa. Tinyere ntọala ya dị mfe, ọsọ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, na nhọrọ ịkwụ ụgwọ echedoro, Shopify bụ ezigbo nhọrọ maka ịmepụta ụlọ ahịa n'ịntanetị na 2016.
Ọ bụkwa otu n'ime kacha mma Ecommerce nke oge a na ekele maka eziokwu na ọ bụ ngwa mgbakwunye WordPress n'efu, na-enye ọtụtụ elele maka saịtị e-commerce na-arụ ọrụ na ikpo okwu a. A na-ahazi ya nke ọma, na mgbakwunye na ịnwe ụgbọ ahịa na nhọrọ ịkwụ ụgwọ echedoro, ọ na-enye ọtụtụ isiokwu ịhọrọ site na.
3. M! Kart
Ọ bụ dị ọhụrụ ecommerce n'elu ikpo okwu kere na ebumnuche nke ijikọta uru nke isi mmalite na ebe nrụọrụ weebụ na-akwado ecommerce. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu customizable, a atụmatụ-ọgaranya n'elu ikpo okwu, na multi-layered nche, na echichi na-adịghị achọ ọtụtụ nke oru ihe ọmụma.
Uzo a na ahia ahia di ka Shopify, ya na ihe di iche nke enyere otutu ihe n’ime ya. Iji malite BigCommerce ị nwere ike ịnweta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị zuru oke, bandwidth na nchekwa na-akparaghị ókè. Enwekwara nnwere onwe ịgbakwunye ọtụtụ ngwaahịa ịchọrọ.
Nke a Ecommerce n'elu ikpo okwu dabara adaba maka ndị na-ere ahịa buru ibu na ndị chọrọ ebe nrụọrụ weebụ e-commerce dị elu. O nwere nchebe dị elu, nke a na-edozi nke ọma, na mgbakwunye na ịnye ọtụtụ atụmatụ bara uru maka nyiwe e-commerce gụnyere nkwado maka ọtụtụ asụsụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ahịa azụmahịa » Top 5 nke kacha mma Ecommerce nyiwe maka 2016
hehe, lee anya ka ị ghara itinye Prestashop ...
Ikpo okwu na-anọgide na-atụle bụ ịrụ ụka adịghị Shopery na-enye gị ohere ike gị online ụlọ ahịa, site na ngwaọrụ ọ bụla na 4 mfe nzọụkwụ na-enweghị mkpa maka teknuzu ihe ọmụma. 🙂
Zaghachi na Saray
Ịzụ ahịa dijo
Ezigbo Saray! Daalụ maka ịkpọtụrụ anyị na ikwu okwu ọma banyere anyị 🙂